Mitemo mitsva yeGDPR
Maererano nehurumende itsva Data Protection Regulations yaMay 2018, vatariri veCentral Language School Cambridge (CLS) vanoda kuudza vose vashandi, vadzidzi, vamiririri, mauto uye vamwe vatsigiri veChikoro vanotitumira nesu pawebsite ino kana Chikoro email yekero yatakagadzirirwa kushandiswa kwevashandi. Nokushandisa iyi webhusaiti kana kupa Chikoro chero dunhu rega rako, unobvumirana kubvuma mutemo wega wega weCCLS.
Dunhu rega rega rinochengetedzwa zvakachengetwa muhofisi yeC CLS yakavharidzirwa uye inounganirwa kuRCS zvinyorwa chete uye hazvizogoverwi kunze kweChikoro pasina kubvumirwa kwako.
Kana CLS yakagadzirirwa kuvashandi vedu nehupfumi, nekupa CLS chero dunhu rega (zita, aderesi, nhamba dzefoni) unobvuma zvinetso zvekuchengetedzwa zvinoshandiswa neinternet kushandiswa uye kubvumirana kuti CLS haigoni kubvuma chero chekodzero yekurasikirwa kana kushandisa zvisina kunaka dhenda izvo zvinoitika mukushungurudzwa kunze kwemasimba edu.
Ndeipi data inounganidzwa uye yakachengetwa neboka rehutungamiri paCLS?
Mudzidzi wehupenyu hwemunhu asati ainyoresa paChikoro (zita, nhare dzekutsvaga, adhire nezvimwewo) nekuda kwekutarisira
ruzivo pamusoro pezvinangwa zvedzidzidzi dzekudzidza nekufambira mberi mberi kwechiRungu
Mudzidzi wekupedzisira wemakore anozivisa
vhiki yevhiki nekuongorora mafomu uye kuguma kwemaitiro kuongorora mafomu
vashandi, vatariri, vamiririri uye vanoziva nezvehupenyu hwemunhu (zita, nhare dzekutsvaga, adhire nezvimwewo) nekuda kwekutarisira
zvinyorwa zvepi zvinyorwa zvema email zvinosanganisira mibvunzo yekambani, maCVs uye chero hutano hwemagariro evanhu
Nei CLS ichichengetedza uye inoshandisa data yako pachako?
mukuenderana neBritain Council Accreditation Scheme mitemo nemitemo
kutarisa kufambira mberi kwevadzidzi
nokuda kwezvinangwa zvehupfumi hwevadzidzi
nekuda kwehutano hwehutano
Ndezvipi kodzero dzako maererano nedunhu rako pachako?
Iwe une kodzero dzinotevera maererano nekugadziriswa uye kuchengetwa kwepasita rako pachako - kodzero yeku:
kukumbira kusvika kune zvaunoda iwe izvo CLS inobata
kukumbira kuti CLS iparadze chero dunhu rega rega kana risingazodikanwi neCSCL yekutonga
chikumbiro chinofanira kuchinjwa kumashoko ako ega
mikumbiro yekukumbira kumashoko ako ega